Dhiyabhorosi dhiyabhorosi inowanikwa kwose kwose, asi kuvashandisa mukutsvakurudza kwevanhu kunogona kuva kunonyengera. Muhupenyu hwangu, kune chimwe chinhu chakadai se "hapana mabiko emangwanani" kutonga deta: kana iwe usingaisi mubasa rakawanda rokuunganidza, iwe unenge uchida kuisa mubasa rakawanda funga nezvazvo uye kuifungisisa.
Iyo huru dhesi yezvinyorwa zvezuva ranhasi-uye zvichida mangwana-ichasvika kuva nezvimwe gumi. Zvitatu zveizvi kazhinji (asi kwete nguva dzose) zvinobatsira pakutsvakurudza: guru, nguva dzose-uye, kwete. Zvinomwe zvinowanzo (asi kwete nguva dzose) zvinetso zvekutsvakurudza: zvisingakwanisi, zvisingawanikwi, zvisingarevi, zvinokonzera, zvigadziriswe zvisinganzwisisiki, zvakasvibiswa, zvisingasviki, uye zvinonzwisisika. Zvakawanda zvezviitiko izvi zvinoguma zvauya nokuti makuru makuru emitemo haana kusikwa nokuda kwekutsvakurudza kwevanhu.
Kubva pane pfungwa dziri muchitsauko ichi, ndinofunga kuti kune nzira nhatu dzinokosha iyo makuru makuru ezvinyorwa achave akakosha zvikuru mukutsvakurudza kwevanhu. Kutanga, vanogona kuita kuti vatsvakurudzi vaite chisarudzo pakati pekukwikwidza kwezvakafanotaurwa. Mienzaniso yemhando iyi yemabasa inosanganisira Farber (2015) (New York Taxi drivers) uye King, Pan, and Roberts (2013) (kuongorora muChina). Chechipiri, makuru makuru emitemo anogona kuita kuti kuve nekuvandudzwa kwemurairo kuburikidza nezvino. Muenzaniso werudzi rwebasa iri Ginsberg et al. (2009) (Google Flu Trends). Pakupedzisira, hurukuro huru yemadhora inogona kubatsira vatsvakurudzi kuita zvikwereti zvinokonzera pasina kuedza miedzo. Mienzaniso yemhando iyi yemabasa Mas and Moretti (2009) (peer effect on productivity) uye Einav et al. (2015) (kushanda kwekutangira mutengo pamasendiki eBay). Chimwe nechimwe chezvinhu izvi zvinosvika, zvisinei, zvinowanzodikanwa kuti vanotsvakurudza vauye nezvakawanda kune data, sekusanangurwa kwehuwandu hunokosha kuenzanisa kana kuti mazano maviri anoita zvipikiso zvinokwikwidzana. Nokudaro, ndinofunga nzira yakanakisisa yekufunga pamusoro pezvinhu zvakakura zvingangodaro zvingaita ndezvekuti vanogona kubatsira vatsvakurudzi vanogona kukumbira mibvunzo inofadza uye inokosha.
Ndisati ndapedzisa, ndinofunga kuti zvakakosha kufunga nezvemashoko makuru ezvinyorwa anogona kuva nemigumisiro inokosha pahukama pakati pe data nedzidziso. Kusvika ikozvino, chitsauko ichi chakatora nzira yekutsvakurudza inyanzvi yekutsvakurudza. Asi makuru makuru ezvinyorwa anoitawo kuti vatsvakurudzi vashandise zvinyorwa zvinotungamirirwa . Izvi zvinoreva, kuburikidza nekunyatsogadziriswa kwechokwadi, maitiro, nemapuzzles, vatsvakurudzi vanogona kuvaka dzidziso itsva. Izvi zvinoshandiswa, dhiyabhorosi-yekutanga nzira yezvinyorwa haisi itsva, uye yakanyanya kunyatsotsanangurwa naBarney Glaser naAnselm Strauss (1967) pamwe nekudanwa kwavo kwedzidziso yepamusoro . Iyi nzira yekutanga-denga, zvisinei, haisi kureva "kuguma kwezvinyorwa," sezvakataurwa mune dzimwe zvemashoko ezvekutsvakurudza munharaunda ye digital (Anderson 2008) . Pane kudaro, sezvo nzvimbo yehupenyu inoshanduka, tinofanira kutarisira kuwirirana muhukama pakati pe data nedzidziso. Munyika umo kusunganidzwa kwedhesi kwaive kwakadhura, zvakanakira kuunganidza chete data iyo dzidziso inoratidza kuti ichava yakakosha zvikuru. Asi, munyika umo deta yakawandisa yakatove yakabhadhara pachena, zvinonzwisisika kuedza zvakare dhiyabhorosi (Goldberg 2015) .
Sezvandaratidzwa muchitsauko chino, vatsvakurudzi vanogona kudzidza zvakawanda nekuona vanhu. Muzvitsauko zvitatu zvinotevera, ndicharondedzera kuti tingadzidza sei zvinhu zvakasiyana uye zvakasiyana kana tikanyatsobatanidza kuunganidza kwedu uye tibatanidzwa nevanhu zvakanyanya kuburikidza nokuvabvunza mibvunzo (chitsauko 3), kuedza kuedza (chitsauko 4), uye kunyange kuvabatanidza mukutsvakurudza zvakananga (chitsauko 5).